News Collection: गाडि किन खस्छन् खोलामा ?
गाडि किन खस्छन् खोलामा ?
“किन पुलिसलाई घुस ख्वाउने भनेर राम्रै तयारी गरेर टेष्ट दिन गएको दुवै पटक फाल्दियो । अनि इटहरिमा एकजना चिनेको डीएसपीसँग कुरा गरेँ । उहाँले आउनुहोस न म मिलाएर पठाइदिउँला भन्नुभएपछि इटहरिवाट लाइसेन्स वनाएर आएँ । तपाई काठमाण्डौवाट लाइसेन्स वनाउने कुरा नसोँचे हुन्छ । पटकैपिच्छे फेल पार्छन्, घुस पनि टन्नै लिन्छन् ।” एकजना साथीले मलाइ यस्तो सल्लाह दिए मोटर साइकलको ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्ने कुरामा । मैले के पनि थाहा पाएको थिएँ भने एक जना साथीका वैनी–ज्वाई पुलिसका माथिल्लै स्तरका जागिरे थिए । उनले टेष्ट पनि नदिइकनै कार सम्म चलाउने लाइसेन्स लिएका थिए । हजुरलाइ पछि गाह्रो हुन सक्छ म ठाउँमा भएको वेलामा निकाल्दिहाल्छु भनेर निकाल्दिएका अरे । अरु दुई जना साथीहरुले पनि चिनजानको भरमा लाइसेन्स वनाएका थिए ।
मेरा अर्का एकजना साथी चाहिँ अमेरीकातिर जाने धुनमा थिए र उनले एउटा ड्राइभिङ स्कलमा पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर ड्राइभिङ सिक्दै थिए । यति पैसा वुझाएपछि लाइसेन्स पनि वनाइदिने वन्दोवस्तमा उनले सिकेका थिए । यी सवै कुरा सुनेपछि मेरो लाइसेन्स वनाउने जाँगर घटेको थियो । एकजना साथी पुलिसका सइसम्म त भएका थिए तर उनी नेपालगंजतिर थिए र उनलाई दुःख दिन पनि मन लागेन । म सँग मोटरसाइकल पनि थिएन र लाइसेन्सको आतुरी पनि थिएन । त्यसैले लाइसेन्स वनाउने कुरा मैलै त्यहि विसाइदिएको थिएँ । (शारांशः अदक्ष ड्राइभर जताततै )
विराटनगर जाने एउटा नाइटवस गौशालावाट केहि यात्रु लिएर चक्रपथ हुँदै कलंकी गएर रोकियो । त्यहाँ पुग्ने वित्तिकै सवै सिटमा मान्छे भरिए । केहि मान्छेहरु वसको कन्डक्टरलाई कराउँदै थिए “खोइ त मेरो सिट, यहाँ त अरु मान्छे अघिनै वसिसकेका छन्” । टाढाको वाटो जानुछ, सिट नमिल्ने हो भने म यो गाडिमा जान्न भनेर यात्रुले कराउँदै गर्दा कण्डक्टरले पछि मिलाइदिने भन्दै थाम थुम पार्दै थियो, यतिकैमा गाडि अगाडि वढ्यो । गाडि रोक, गाडि रोक भनेर यात्रुले भन्दा भन्दै पनि गाडि निकै पर पुगिहाल्यो । एक जना करिव पैसट्ठीदेखि सत्तरी वर्षकी वुढिआमै पनि सिट नपाउनेमा थिइन् । उनलाइ चाँहि खलासिले चाँडै नै मुडा मिलाइदियो र अली पर पुगेपछि सिट दिने आश्वासन दियो । उनले भन्दै थिइन “यहि हुन्छ भनेर नै मेरा छोराले सात दिन अगाडि नै वसको टिकेट काटेको थियो” । मुडामा सम्म वस्न पाएर उनको रिस धेरै नै घटेको थियो । गाडि निकै नै पर पुगि सकेको थियो र सिट नपाउनेहरु छेउछाउका सिटका डण्डामा आड लागेका थिए र सिट नमिलेकाहरुको रिस पनि कम हुँदै गएको थियो । गाडी महादेववेंसी काटेर अगाडि पुगेपछि तिन जना मान्छे वस पर्खेर वसेका देखिन्थे । तिनमा दुइवटि १८–२० वर्षका देखिने महिला र एक जना अधवैंसे पुरुष थिए । “गुरु चढाउँ यिनलाई ?” खलासी सोध्छ । “केटि राम्रा छन् ?” गुरुजी सोध्छ । “राम्रा छन्” खलासी जवाफ दिन्छ । “राम्रा छन् भने किन सोध्छस् त ए मुन्द्रे” भनेर ड्राइभरले गाडि रोक्छ । “राम्रालाई त मेरा काखमा पनि ठाउँ छ है” एउटा यात्रुले थप्छ । तिनि पनि त्यहि भिडमा कोचिन्छन् । ( शारांशः ठगि, कोचाकोच, र गाडीमा कामगर्नेहरुको योग्यतामा कमि, सामान्य मानविय व्यावहारसम्म नगर्दा पनि हाम्रामा कानुन नलाग्ने )
एउटा अनकण्टारको ठाउँमा एउटा मात्र होटल भएको ठाउँमा गएर गाडि रोकिन्छ । ल अव खाना खाउँ है भनेर खलासीले उर्दी लगायो । सवै मान्छेका अनुहार मलिन भए होटलको अनुहार देखेर । खाना नखाउँ भने अन्यत्र गाडि रोक्दैन, भोक पनि लागेको छ, खाउँ भने खाना देख्दै वासि र स्वाद विनाको छ । दुइटा ११/१२ वर्षका जस्ता देखिने केटाहरु एउटी अधवैंसे महिला सँग छिलिएर कुरा गर्दै भाँडा पखालिरहेका थिए । “तिम्रो पनि कुखुरे वैंस चढेछ ।” उनले भनिन । गाडिका स्टाफहरु भित्रको कोठामा खान पसे । यात्रु सवैले खाइ सक्दा पनि गाडिका स्टफ भित्रको कोठावाट वाहिर आएका थिएनन । गुरुजी र उनका स्टाफको अनुहार हेर्दा लाग्थ्यो उनले केहि खोया विर्के त लगाएकै थिए । नभन्दै कण्डक्टर वसभित्र पस्ता ह्वास्सै रक्सि गनाएको थियो । (शारांशः ग्राहकको इच्छाको वेवास्ता, ठाडै मोनोपोली हुँदा पनि कानुन नलाग्ने )
गाडिको अगाडिको सिशामा देवी देवताका फोटाहरु प्रसस्तै झुण्डिएका थिए । “माता दुर्गे रक्षा गर”, “जय काली”, “भगवान विश्वकर्मा कि जय”, जस्ता भक्तिभावका शव्द लेखिएका थिए फोटोको तल्लो भागमा । यिनका साथमा सानु वुध्दको मुर्ति र शिवको मुर्ति पनि थिए । शिवको मुर्तिमा भने सानो लाइट वल्व जोडेर उज्यालो पारिएको थियो । (शारांशः गाडिको अवस्था सुधार्नेमा भन्दा भगवान भरोसामा जोड )
“अव त वाटो सजिलो आयो म चलाउँछु है गुरुजी” खालासीले भन्यो । “एक छिन पख” गुरुजीले जवाफ दियो । करिव आधा घण्टा पछि गाडि अलि वढिनै घच्याक घच्याक भएको थियो, थाहा भयो कि कुनै सिकारुले गाडि चलाइ रहेको छ । “तिमीहरुले सिक्न त सिक तर हामीलाइ चाँहि नमार है” एक जना यात्रु कराए । (शारांशः जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता र कानुनको पालना गराउनेहरुको कमजोरी )
”“ए गुरुजी गाडि एकछिन रोकौं न हो कतै, पिसावले साह्रै च्याप्यो” एक जना यात्रुले भने । पिसावले त मलाइपनि च्यापेको छ है भनेर दुइजना यात्रुले सहि थपे । “अगाडि गाडि रोकेको वेलामा चाँहि के हेरेर वस्नु भो ? अव अलि पर रोकौंला” गुरुजी झर्कियो । यतिकैमा एकछिन सवै चुपचाप भए । करिव २० मिनेटपछि अर्को यात्रुले गाडि रोकौं न हो गुरुजी भन्दै कराए । त्यसको १० मिनेट पछि गाडि रोकियो । ल छिटो छिटो गर्नुहोस भनेर गुरुजी करायो । (शारांशः सामान्य मानवअधिकार संवन्धि ज्ञानको अभाव र ग्राहकको इच्छाको वेवास्ता )
गाडि कतै लहानको छेउछाउ पुगेको थियो होला, ल अव पिसाव फेरौं, चिया सिया खाउँ है भन्दै खालासीले उर्दी लगायो । यो ठाउँमा पनि एक्लो पसल मात्र थियो । आधाजसो मान्छे निन्द्रामै थिए, र वाँकी अरु वाहिर निस्किए । ल अव जाउँ भन्दै गुरुजी ले गाडिको हर्न वजायो । गाडि स्टार्ट गर्न खोज्यो तर गाडि स्टार्ट नै भएन । “ल ल वलिया वाँगा साथीहरुले वाहिर निस्केर गाडि ठेलौं त” खलासी करायो । ७/८ जना मान्छे गाडिवाट वाहिर आएर गाडि ठेल्यौं , गाडी स्टार्ट भयो, अनि गाडि इटहरि तिर लाग्यो । (शारांशः जति हालत खराव भएको गाडि पनि वाटामा गुडाउन पाउने नियम )
विच विचमा गाडिमा चढ्न खोज्नेमान्छे हरुले यो गाडी कहाँ जाने हो भनेर सोध्दा खलासीले उनीहरुलाइ कहाँजाने भनेर सोध्थ्यो । उनीहरुले धरान जाने भने भने उसले यो गाडि धरानै जाने हो भन्थ्यो । झापा जाने मान्छेलाइ उस्ले काकरभिट्टा जाने भन्थ्यो । कतिलाइ त इलाम नै जाने भनेर काठमाण्डौं देखि नै ढाँटेको पनि रहेछ । (शारांशः ठगिको पराकाष्टा हुँदा पनि ठगहरु नसमातिनु )
त्यो गाडिमा नेता जस्ता देखिने कोहि पनि थिएनन् । नत कर्मचारीका हाकिम हरु नै थिए । त्यो गाडिमा ठुला उद्योगपति वा व्यापारी हुने कुरै भएन । एनजीओ का ह्याट लागाएका मान्छे पनि खासै कोहि थिएनन् । पत्रकारहरु पनि यस्तो ठुलावसको पट्यार लाग्ने यात्रामा किन हुन्थे । उनलाइ त नेताको पजेरो देखि लिएर कर्मचारीका गाडि वा निलो ल्पेटका एनजीओ का गाडिको पनि कमि छैन । वसमा चढ्नेहरु खाली सस्तो जिन्दगी भएका जनता मात्र थिए जसलाइ ढाँटिनु, ठगिनु, खोलामा खस्नु दैनिकि नै थियो । (शारांशः हाम्रो समाजका ठुलावडाहरुले वस चढ्दा जात जाने रोग पंचायतकालकै हो, वहुदलकालमा त यसले झनै महामारी कै रुप लियो । अनी ठुला भनाउँदाहरु अहिले आएर वल्ल सोध्न थालेका छन् “हाम्रा गाडि किन खस्छन् खोलामा ? जनताका लागि काम गर्ने भनेकाहरु नै जनताको दैनिक जीवनदेखि कति टाढा छन् भन्ने कुराको जिउँदो उदाहरण हो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र )
लेखक अमेरिकास्थित युनिभर्सीटि अफ न्यू मेक्सिकोमा कार्यरत छन् ।